Shan Arrimood Oo Madaxweyne Farmaajo Khudbadiisii Kaga Hadlay | Gaaroodi News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad ka horjeediyay Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhowr arrimood oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo qayb ka mid ah marxaladihii la soo maray iyo halka hadda looga dhaqaaqayo meesha la taaganyahay si doorasho loo aado.
Doorka Golaha Shacabka ee jihada dalku aadayo
Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in golaha baarlamaanku uu udub dhaxaad u yahay jiritaanka qaranimada dalka iyo sharciyada lagu dhaqayo.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in ay qasab tahay in baarlamaanku uu door ku yeesha masiirka iyo jihada uu dalku aadayo ,isagoo intaa raaciyay in baarlamanaku yahay marjicii loola laabanyay xalinta arrimaha murugsan.
“Dhamaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenu aadayo waxaa qasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjaca loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudadii uu xilka hayay ay dowladdiisu ku dadaashay in baarlamaanku dalka ka qaataan kaalinta ay ku leeyihiin.
“Waxaan xaqiijiyay in heshiisyada masiiriga ah ee laanta fulintu ay gaarto aan u soo celino baalamaanka si ay uga dooddaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan”
Muddo kordhintii iyo wixii ka dhashay
Golaha Shacaka ee baarlamaanka dolwadda federaalka Soomaaliya ayaa 12 bishii Abriil muddo kordhin u sameyay hay’addaha dowladda,waxaana tallaabadaas diidmo kala horyimid mucaaradka,maamulgoballeedyada iyo beesha caalamka iyadoo ay dhamaantood soo jeedinayaan in arrintasa laga laabto isla markaana lagu laabto wadahadalkii oo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii September.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadiisa maanta ku sheegay in xeerkii Golaha Shacabku ansixiyeen ee muddada loogu kordhinayay hay’addaha dowladda uu ahaa fursad dalka looga badbaadinayay dib u dhac iyo hubanti la’aan dalka la soo darista.
Wuxuu sheegay in sharcigaas ay ka hor yimaadaan qaar ka mid ah dowladda goballeedyada isla markaana magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka abuuray cakirnaan iyo qalalaase.
“Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaase,xasarado qorsheysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la galiyay naftooda iyo hantidooda” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Lama oggalaan karo mar labaad
Maxamaed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in magaalada Muqdisho maadama ay tahay caasimadda umadda Soomaaliyeed aan la oggolaan doonin ay dib ugu laabato dhibaaooyinkii ay soo martay soddankii sano ee dalka Soomaaliya uu burburku ka jiray.
Wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dooneyso in caasimaddu noqoto meel umadda u dhaxeeysa lana tartanta caasimadaha aduunka sidaas darteedna ay dowladdiisu doortay in laga shaqeeyo xasiloonida dalka si khilaafka Soomaalida ka dhex jira aan shisheeye uga faaiideysan .
Ku wareejinta Ra’iisal wasarae Rooble doorashada iyo amnigeeda
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadiisa ku sheegay in ra’iisal Rooble uu hoggaamin doono arrimaha doorashada iyo amnigeeda.”Waxaan halkaan ka cadeynayaa in Ra’iisul wasaare Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta doorashada iyo amniga sidoo kale fulinta qorshaha sida waafaqsan dastuurka waxaa iska leh ra’iisal wasaaraha.”Madaxweynaha ayaa xukuumadda faray inay howshaas baaxadda leh u hoggaansamaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay siyaasiinta a kala aragtida yihiin in ay ka shaqeeyaan danta guud ayna ka waantoobaan kicinta bulshada kana fogaadaan wax walba oo khatar galinaya amniga dalka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku baaqay in siyaasiintu ay ku soo laabtaan dhabaha wadahadalka iyo is qancinta taas oo lagu gaari karo wax heshiis lagu yahay.
“Mudanayaal iyo Marwooyin waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud kana waantoobaan kicinta dadweynaha kana fogaadaan wax amniga khatar galin kara” ayuu yiri madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo